Kugadzirira Tsika dzeVatengi | Martech Zone
Kugadzirira Maitiro evatengi
Wednesday, May 23, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Vatengi vanhasi vakagadzira yakasarudzika pre-kutenga maitiro - kunyangwe pavanotenga munzvimbo. Iko kushandiswa kwesoftware application uye nhare mbozha usati watenga kunze kwenyika kuri kukura mukuzivikanwa. Vatengi vari kutsvaga nzvimbo dzekutenga, kuverenga wongororo, kutsvaga madhiri uye kutsvagisa chigadzirwa. Nhau huru kune vatengesi ndeyekuti kutenga mukati-munhu kuchiri kukosha.
Ini pachangu, ndinowanzo tsvagisisa pamhepo nekutenga online… kunze kwekunge ndiri neshungu yekuwana chigadzirwa mumaoko angu nekukasika. Ini ndinovenga kutenga, zvakadaro, saka ini ndinogona kuve ndakasiyana zvakasiyana nevamwe vanhu. Chinhu chimwe chandakawana zvakare ndechekuti kutenga pamhepo hazviite kuti ndichengetedze chero mari. Kazhinji, ini ndinoona ndichibhadhara zvakanyanya paIndaneti pane kusagadzikana.
Infographic kubva Milo. Milo ndeyekutenga kwenzvimbo kunoitwa nyore. Milo anotsvaga masherufu emunharaunda mune chaiyo-nguva yekutsvaga yakanakisa mitengo uye kuwanikwa kwezvigadzirwa iwe zvaunoda kuve nazvo-izvozvi.
Tags: ecommercetsikakutenga sarudzotenga tsvakiridzotsvakurudzochitoromutengesikunotengatsika yekutenga
Regedzera Kufona Kwekutevera kweMushandirapamwe Kuyera
Vhidhiyo: Yemagariro Midhiya Revolution - Iyo Parody
Boise SEO Kambani
May 25, 2012 pa 4: 36 PM
Nice infographics. Ini ndinogona kukwanisa kushandisa izvi.